Iprofayile yenkampani-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
I-Beijing SinoCleansky Technologies Corp yinkampani yezixhobo zegesi ezinobungcali kwiirhasi zamashishini, amandla, ezonyango, i-welding, umlilo kunye nezinye iinkqubo, inika isisombululo-esinye-sokumisa esineendidi ezahlukeneyo zeesilinda zegesi, isixhobo sejumbo tube, izixhobo ze-cryogenic, kunye nenkonzo ehleliweyo.
I-SinoCleansky jumbo cylinder iveliswa ngokwe-ISO11120, ngomgangatho we-DOT, kunye nesatifikethi se-TPED & ADR kunye nengxelo yovavanyo lwe-BV. Izikwere / izikhongozeli / ezirhuqwayo zisetyenziswa kakhulu ukugcinwa kwegesi kunye nokuthuthwa, kubandakanya i-CNG, iHydrogen, iNitrogen, iArgon, iHelium, umoya kunye nezinye iintlobo zeegesi zeshishini.
T75 & T50 ISO Tank Isikhongozelo
Itanki leSinoCleansky ISO lenziwa phantsi kwe-EN13530, imigangatho ye-ASME, enesiqinisekiso seRejista sikaLloyd.
Iitanki ze-ISO ze-T75 ze-LIN, LAr, LOX, LN2O, LCO2, kunye ne-LNG, kunye ne-T50 ISO tanki ye-ammonia yolwelo, iifriji, i-LPG, i-CL2, i-LSO2 kunye nezinye iigesi. Ngobuchwephesha obuphezulu, itanki ye-SinoCleansky ISO inentsebenzo efanelekileyo yokugquma ukuqinisekisa ilahleko esezantsi ngexesha lokuhamba.
Izixhobo zegesi zeSinoCleansky:
Uxinzelelo oluphezulu iisilinda zegesi, incl intsimbi, ialuminiyam, kunye neesilinda ezidityanisiweyo;
Iisilinda ezomeleleyo ze-chlorine engamanzi, i-FM200, i-acetylene, njl .;
Iisilinda ze-Cryogenic, iitanki, iilori, iitanki ze-ISO;
Izilinda ze-CNG kunye ne-LNG kunye nezixhobo;
Isisombululo seSinoCleansky esenziwe ngobunjineli:
Abathengi abaqeqeshiweyo be-Mini LNG, isikhululo se-LCNG se-satellite, ukucocwa kwe-N2, ukuphathwa kwegesi okuhlanganisiweyo kunye nokunye, iSinoCleanky ithatha amava ayo kwimizi-mveliso kunye nobuchwephesha bobuchwephesha ukubonelela ngezisombululo ezigqwesileyo zobugcisa.
Izixhobo zerhasi i-SinoCleansky ihambelana nemigangatho engqongqo yamazwe aphesheya, evunyiweyo kwaye yaqinisekiswa ngabasemagunyeni bokuhlola bamazwe jikelele abaqinisekisa ukusetyenziswa kwexesha elide okukhuselekileyo nokufanelekileyo, kunye nodumo oluhle lomzi mveliso.
I-SinoCleansky: Uzalelwe kunye nomsebenzi wokwenza isibhakabhaka sicoceke! Ndinikezelwe kwintengiso ye-NGV ngokubonelela ngenxalenye ebalulekileyo yenkqubo yokuguqula i-NGV: Iisilinda ze-CNG, zombini uhlobo I kunye nohlobo II.
Yandiswa kwiimarike zerhasi yemizi-mveliso, kunye noluhlu olubanzi loxinzelelo lwerhasi yensimbi yeoksijini, i-nitrogen, iargon, ikharbon dioksiyidi kunye nokunye.
I-cylinders ze-SinoCleansky CNG ziphumelele imarike entle eThailand, Singapore, Maymmar, Pakistan, Bangladesh, nakwamanye amazwe aphakathi e-Asiya, embindini mpuma, eAfrika, njl njl.
Izilinda eziqalisiweyo ze-cryogenic ziphumelele ngempumelelo, kunye nokuqinisekiswa kwe-DOT kunye ne-EN.
Ukunika isisombululo esifanelekileyo sothutho kunye nokugcinwa kwe-CNG, izitya ze-SinoCleansky CNG jumbo ze-jumbo kunye nabakhweli zingene kwiimarike zase-Southeast Asia nase-Afrika.
Isilinda se-LNG yesithuthi esamisiweyo;
I-SinoCleansky ibonelela uluhlu olubanzi lweesilinda zegesi kunye neetanki zeerhasi yendalo kunye neemarike zegesi zeemveliso.
Iboniswe kwi-ANGVA bonisa iMexico, kwaye iphumelele iimpendulo ezilungileyo zentengiso.
Ngaphezulu kwesigidi esinye samaqwengana erhasi abonelelwe kwimarike yaphesheya, uphawu olubalulekileyo kwimbali yaseSinoCleansky.
Ngaphandle kweesilinda zegesi kunye neetanki, iSinoCleansky inikezela ngesisombululo esipheleleyo sokunyanzelwa kwe-CNG, ukuhambisa, ukuhambisa nokugcina, kunye namaqabane ethu amaTshayina.
I-SinoCleansky inentsebenziswano yexesha elide kunye nabaphathi abaphezulu bokuvavanywa kweqela lesithathu, incl. I-TUV, SGS, BV, LRS, njl, njlnokuqinisekisa abathengi bethu ngomgangatho wesandi kunye nenkonzo elungileyo.
Yaziswa kwivenkile yokuqala ye-intanethi yeesilinda zegesi kunye neetanki emhlabeni: www.buycylinder.com
I-SinoCleansky i-headquarter yafudukela eWangjing Soho, isakhiwo esiphezulu seofisi eBeijing.
Isityalo sokuqala esikhweliswe ngemitha esincinci se-LNG kunye neqonga lovavanyo ekusebenzeni kweSinoCleansky.
Isiqalo esitsha seSinoCleansky, ejolise kumashishini asibhozo:
Izixhobo zamandla, Isityalo iMini-LNG, i-NGV, iigesi zeMizi-mveliso, i-Welding kunye nokuSika, ukuCima uMlilo, unyango kunye nonyango lwaManzi.